princeakarit - MYSTERY ZILLION
မူလ › princeakarit › မှတ်ချက်များ ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
princeakarit · အချက်အလက်
Almost of android OS,you'll see some of problem in the hardware. This case is no much driver from software. In this case, you can solve it by FE_explorer. Don't forget root your device before. :D
in HUAWEI C8500 2.3.4 COMES OUT ..
Comment by princeakarit
realeyelay;79855 said:ဘယ်လို လုပ်လုပ် computer ဖြစ်ဖြစ် phone ဖြစ်ဖြစ် wifi password ပေါ်ရင် ရပြီဗျို.။ နည်းလမ်း သိရင်......ok
backtrack4နဲ့လုပ်လို့ရတာတွေကို ရေးထားတဲ့ Thread တွေရှိပါတယ်... သုံးချင်ရုံသက်သက်တော့မဟက်ပါနဲ့...
in wifi wep code ကို nokia phone မှာ hack လိုရလား
မှန်ချက် လန်ထွက်နေတာဘဲ... မြန်မာပြည် အိုင်တီ တက်ကနီရှင်ဘွပေါ့... မကျေနပ်ရင် ထွက်လိုက်... အဲလိုနဲ့ ကျနော်လည်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများရဲ့ ဘလက်လစ်ဖြစ်သွားတာဘဲဗျ... :d
in IT Technician
security Manager ဆိုတာလေးကို ရအောင်ရှာပြီးထည့်လိုက်တယ်... ရှာတဲ့နေရာက mobile9 တို့ လို ဖိုရမ်တွေမှာ ရှာတယ်...
ပြီးရင် HelloOX ကိုထည့်လိုက်တယ်... နောက် helloOX နဲ့ ဖုန်းရဲ့ System ကို Hack လုပ်လိုက်တယ်... ဒါဆို…
in Symbian OS ဘယ်လိုကြည့်
Access Control လုပ်ထားတာဆိုတော့ မလွယ်ပါဘူး ခင်ဗျာ.... ကျနော်တော့ မလုပ်ဖူးသေး၀ူး...
in MAC Filtering လုပ်ထားတာကို ၀င်ချင်လို ့
java free hosting ကတော့ တော်တော်လေး ရှားပါတယ်။ ရှိရင်လည်း အကန့် အသက်တွေများပါတယ်... ကျနော်လည်း အရင်က ရှာဖူးပါတယ်... တွေ့၀ူးဗျ :D
in Java Hosting Site
lincachara;69524 said:Mystery Zillion မှ အစ်ကို အစ်မတို့ရေကျေးဇူးပြုပြီးအကြံလေးပေးကြပါအုံးဗျာ။ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာ ပါဝါစပ်ပလိုင်းကခဏခဏလောင်နေလို့လောင်တာမှတလအတွင်း ၃ခါရှိပြီခင်ဗျာ။အဲဒါလေးတစိတ်လောက်ကျေးဇူးပြ ုပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးအကြံပြ ူပေးကြအုံးဗျာ ကျေး…
in power supply ခဏခဏလောင်ခြင်း
power supply ကို အတိအကျစစ်ချင်ရင်တော့ digital meter လိုပါတယ်။
power supply တစ်ခုဟာ AC 220 နဲ့ 230 အတွင်း input လုပ်နိုင်ပြီး output အနေနဲ့ 12 ဗို့5ဗို့3ဗို့ စတဲ့ voltage တွေကို (+) ရော (-) ပါထုတ်နုတ်အသုံးပြုပါတယ်.. ထွက်တဲ့ voltage တွေကို အမ်ပီယာ…
Pc မှာ နောက်ဆုံးပေါ် 3d ဂိန်းဖြစ်တဲ့ xbox ကိုတောင် ကစားနိုင်တဲ့ အီမြူလေတာတွေ ပေါ်တာ ၁၉၉၅ လောက်ကတည်းကလို့တော့ သိရပါတယ်.... လိုချင်တဲ့သူုတွေရှိခဲ့ရင် တင်ပေးပါမယ်... လောလောဆယ် ကွန်မရှိသေးလို့ ခဏစောင့်
in Computer မှာ Playstation2ခွေနဲ့ ဂိမ်းဆော့လို့ ရပါသလား
လုပ်ချင်ရာလုပ် Freedom လေးရှိနေသရွေ့ အေးဆေး :D
in Twitter Banned
ေ၀ဖန်တာကို အပြစ်မမြင်စေလိုပါဘူး...... ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာ ကိုယ်အားနည်းချက်ကို မမြင်တာ သဘာ၀မို့ ပိုမိုတိုးတတ်အောင် လှုံ့ဆော်တယ်လို့ဘဲ သဘောထားလိုက်ပြီး သူတို့ပြောတာ ဟုတ်နေရင် ပြုပြင် မဟုတ်ရင် ဆက်လုပ်နေရုံပါဘဲ... ေ၀ဖန်ချက်လေးတစ်ခု အတွက် ဘာမှစိတ်ထဲမထား…
in Mz အပြောခံရပြီ။
jpro.zack;67151 said:အမ်ဇက်က အကို အစ်မတို့ရေ
javafx ရဲ့photoshop cs2 plugin ကိုဘယ်သူမှ မသိကြဘူးလားဟင်။ သိရင်ကူညီပေးကြပါနော်။
ကျွန်တော်အခု မြန်မာပြည်မှာမရှိတော့ cs3 ကို၀ယ်ဖို့က အရမ်းစျေးကြီးနေတယ်ဂျ။ မ၀ယ်နိုင်ဘူး။ :2: ဒါကြောင့် plugin လေးရှိရင်ပြောပ…
in JavaFX ဘက်ခြေဦးလှည့်ခြင်းများ
yanlin;65796 said:ဘယ်နားရေးရမယ်မသိလို့ ဒီနားလေးမှာပဲ အကြံဉာဏ်လေးတောင်းလိုက်တော့မယ် MP3 မှာ ပါ၀ါသေ တယ်ဆိုလား ဘာလားမသိဘူး Computer နဲ့ ချိတ် လိုက်ရင် သိတော့သိတယ် 0bytes ကြီးနဲ့ နောက်ပြီး mp3 power ဖွင့်ရင်လဲ ဘာမှ ပေါ်လာတော့ဘူး (screen ကနေ မီးလင…
in ကျတော့ mp3 လေး ..........
kyishaung;66157 said:ကောင်းမွန်သင့်လျော်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ရန်ဘာတွေလိုအပ်လဲ..အားလုံးရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ
ပေးပါဦး....အခုကျွန်တော်သိသလောက် ထင်သလောက်နဲ့ ဒီ topic ကိုစလိုက်ပါတယ်.
များကြီးဘဲလို့ထင်တာဘဲ ပြောတတ်၀ူး :d
in ကောင်းမွန်တဲ့ Website ဖြစ်ရန်
Hailo;65781 said:ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ ISA Server တစ်လုံးကို AD user တင်ပြီးသုံးပါတယ်။ client pc များကို username & password ပြီး internet သုံးပါတယ်။ level ကတော့ workgroup levelပါ။ IE ကို ၀င်၇င် Username & password ရိုက်ပြီး ၀င်ရတယ်။ ပြသာနာက…
in AD Users တွေ auto logoff ဖြစ်သွားလို့ပါ။
in Mz အတွက်
ေ၀ယံ112;65760 said:ဖြေပေးကြပါဗျို.။အဲဒီမေးခွန်းမျိုးမေးတဲ. ကို tsunalade ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. net user [press enter]
User accounts for \_\_PC-I
in သူများမကောင်းကြံ ကိုသာခံနေရ
Tsuna lade;65756 said:ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို ့ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော်တို ့အခုသုံးတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို ့ကို limited user အနေနဲ ့ပဲပေးတယ်ကျွန်တော်က admin အနေနဲ ့သုံးချင်လို ့
ဒါလေးများ အကောင့်ပြောင်းသုံးပေါ့နော့ :D
ူလစ်မစ်တက်ယူဇာကနေ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ဆောက်ပြီး…
ကျနော် အထင်ပြောရရင် firewall နဲ့ ပိတ်ထားတာဖြစ်မယ်...
ဆာဗာမှာ firewall တင်ပြီး ပိတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်....
မေးလ်ဆာဗာ တစ်ခု လိုကယ်မှာ ရှိမယ်
အဲဒီ့ မေးဆာဗာကို အင်တာနက်ချိတ်ပြီး ကျန်တဲ့ client တွေကို အဲဒီ့မေးဆာဗာကနေ မေးတွေ ခွဲပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်...
in Internet သုံးချင်လို့
မိုးနတ်သားလေး;65599 said:နံပါတ် (၂) ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သိချင်လို့ပါ... ဖွင့်ရင်တော့ format မချခိုင်းပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ချတော့ write protect လို့ပြနေတယ်... cmd က ချတာတောင်မရဘူး အကိုရ လုပ်ပါအုံး... အကို ရေးလက်စတွေကိုလည်းဖတ်နေပါတယ်... တနေ့တနေ့ ကိုရီးယားကာ…
in USB Thumb Drive Repair
အဓိက အခြေခံတွေကို သိပြီးပြီးလို့ မယူဆလို့ ပြောပါရစေ...
အရင်ဆုံး java basic ကို တတ်လိုက်ပါလား... ဘယ်မှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်တတ်လိုက်ပါ...
java ကို တကယ့်အခြေခံကို တကယ် ကျွမ်းကျင်သွားရင် j2ee ကို ဘယ်မှာ ဆက်တတ်သင့်တယ်ဆိုတာ အလိုလို သိလာပါလိမ့်မယ်...
in J2ee တက်မလို့ပါ
ကျနော့ရဲ့မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို လေးစားစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း :d
in Happy Birthday princeakarit
ToxicImmuner;61669 said:VPOP3 Setting ကို အသေးစိတ်သိချင်လို့သိတဲ့လူများပြောပေးကြပါ။ Local Mail တင်မကဘူး Myantel ကနေပေးတဲ့ mail နဲ့ပါသုံးချင်တာပါ။ အပြင်ကလာတဲ့ mail ကို အတွင်းက network ဆီကိုလဲရောက်ချင်တာပါ။ ဘယ်လိုမျိုး setting လုပ်ပေးရမလဲကိုသိချင်တာပါ…
alexander;61489 said:ကဲ ....
တကယ် လှူဆိုရင်လည်း လှ…
in chat box ပြန်တင်ပေးပါ
ack;61468 said:တောင်ကြီး၊ ကလော၊ ညောင်ရွှေ၊ ရပ်စောက် မြို့များတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲစကတည်းက connection အင်မတန်နှေးကွေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ သုံးမရအောင်ပါ။
in ရှမ်းပြည်တွင် connection မကောင်းဖြစ်နေခြင်း
in CISCO ebooks
tech.lover;61310 said:Internet Cafe တွေမှာ မသုံးစေချင်တဲ့ application တွေကို ဘယ်လိုပိတ်လို့ရလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဥပမာ - IDM အစရှိတဲ့ Downloader တွေ၊ Metacafe လို Bandwidth အများကြီးယူတဲ့ application တွေကို လုံးဝ run လို့မရအောင် ပိတ်ချင်တာပါ။ User တ…
in မသုံးစေချင်တဲ့ application တွေကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလ&#414
naungnaung;61121 said:ကျွန်တော် computer မှာ registry editor မပေါ်တော့လို့
၀င်းဒိုးကို r လိုက်ပါတော့ဗျာ :5:
in regedit editor မပေါ်တော့လို့
ko ko win;61114 said:လုပ်လိုက်လေ.. ကိုစိုင်း ညမဟုတ်ရင် ပြီးတာပဲ လာနိုင်ဖို့ကတော့ ကြိုးစားရမယ်.. အိမ်က :( ဥပုသ်နေ့လေး ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ.. စျေးပိတ်တော့ ဖရီးပဲ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်.. :d
in MZ Seminar
sai kyaw swar wai;60667 said:ခု ကတည်းက ပိုက်ပိုက် စုထားတယ်ဆိုပါတော့......... ဟီးဟီး........
နှစ်ပါတ်လည်ကျမှ Seminar လုပ်မှာလား...... ဒီကြားထဲရော တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ Seminar လေး လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့....... နေရာက မီးမှန်တဲ့ အနော့အိမ်၊ ဆွေးနွေးမှာက ကွန်ပျူ…
အဲလိုလူမျိုးတွေက နိုင်ငံတော်ပစ္စည်း ခိုးနေကြကောင်တွေဘဲဖြစ်မှာ....
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အများပိုင်ပစ္စည်း ကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်နေကြဆိုတော့ အကျင့်ကမပြောက်တာနေမှာပေါ့...
ပြောတာလွန်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် မော်မော်တို့ မင်မင်တို့ရ…
in Uploading.com Premium Account
myanmarmen;60848 said:အစ်ကိုရေ ... Sim card reader က ရိုးရိုးနဲ့ ရှယ် ရှိသေးတယ်လား ဘယ်လိုမျိုးလည်း နော် ...ကျနော်မသိလို့ပါ read only နဲ့ read/write ဆိုပြီးရှိသေးလား .. ကျနော် ပစ္စည်း မှာမလို့ပါ .. မှာလို့ တော့ရမယ်ထင်တယ် .. နော်.. Clone မလုပ်ဘူးနေ…
in Phone sim card readerနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်လို့ပါ
yathar;60611 said:ဟုတ်လောက်ဘူးနော် လိပ် .... Software တွေကို ဝယ်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သတိထားပါဗျာ... Keygen ,crack ,patch လေးတွေ avira ရှေ့ ချကြွေးကြည့်ပါလား ... :d:d:d အသံတော့ ပိတ်ထားနော် နောက်ပြီးတော့ exe နဲ့ သုံးရတဲ့ portable အသေးလေးတွေတချို့ လဲ…
in avira primium 92 day keys
yanaungmyo;60601 said:Avira ဆော့၀ဲလေးရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ပြောပြပါဦး
royal7;60584 said:avira က ပ၇ုိမိုးရှင်းအနေနဲ့ ပ၇ီမီယံကီးကို 3လ သက်တန်းဖ၇ီးပေးပါပြီတဲ့။ အောက်ကလင့်လေးကိုသွား
naungnaung;59566 said:ဒိ topic မှာjava ဖြင့် game ရေးသားခြင်း ရေးနည်း သင်ခန်းစာလေးကို အခြေခံကစပြီး သင်ကြ.းပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် စိတ်၀င်စားလိုပါခင်ဗျာ။ ဂိန်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့က အများကြီးလို့ပါတယ်...
in java ဖြင့် game ရေးသားခြင်း
challenger220;59766 said:ကျွန်တော်လဲ မကြားမိဘူးဗျ။
ကျတော် rapidshare အကောင့် တခုလုပ်ချင်လို့ပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရပါသလဲဗျာ။ ငွေသွင်းဆိုလဲ သွင်းရမှာပေါ့။ တကယ့် တရား၀င်လုပ်ချင်တာပါ။
နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းအသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပါ...
in create for new rapidshare account
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ အကောင့်တစ်ခုထည်းကို နှစ်ယောက်ပြိုင်တူသုံးနေပြီး အ၀င်အထွက်မေးတွေကို နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ လုပ်နေလို့ ဖြစ်တာလားလို့ ကျနော်စမ်းနေပါတယ်....:d
in G-mail က disabled ဖြစ်နေလို.
ashine;58478 said:Kerio Winroute 6.70 win-32 အဲ့ဒီ server နဲ့ server ထိုင်ချင်ပါတယ်.. ISA အကြောင်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး..ဒါပေမယ်
MPT လိုလိုင်းတစ်လိုင်းရရင် modem ကနေ server ကိုသွားတယ်.. အဲ့ဒီ server မှာ Kerio Winroute 6.70 win-32 ကိုသုံးချင်ပါတယ် …
in Kerio Winroute 6.70 win-32 configure
visio;59518 said:Duplicate File Finder by MD5 CRC32 Checksum ကို အင်တာနက်ကရှာတွေ့လို့အရမ်းသဘောကျနေတယ်ဗျာ ခက်တာက share version ဆိုတော့ အကြိမ် 20 ဘဲပေးထားလို ့ဒီမှာ loader ဆိုတာလေးတွေ့လို့ဘယ် software သုံးရမလဲ ကူညီပါဦးဗျာ..:77:
ဘယ်အတွက် loader လည်…
in Free internet
ကျနော်ကတော့ ဇီ၀ိတဒါနဖြစ်တဲ့ သွေးလျှူတာကို အဆိုပြုချင်ပါတယ်...
သွေးတစ်စက် ဖြင့် အသက်ကယ်ကြပါစို့...
Forum မှာ Software တောင်းတဲ Thread တွေက Software တစ်ခု Thread တစ်ခုနှုန်းလောက်နဲ့ တော်တော်များလာတာကို တွေ့ရတယ်...ဒီပုံအတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် (Database လေးတာ မလေးတာ ကျနော် မသိဘူးနော်) နောက် တစ်နှစ်လောက်ဆို ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုရှာရမယ်တောင် သိတော့မှာ အဟ…
in forum ကိုနည်းနည်းအကြံပြုကြည့်ချင်ပါတယ်
၀မ်းသွားရင် ၀ဲကမ်း အဲ မှားလို့ ၀မ်းမလီး၀ဲကမ်းပါ ညီမရေ့
in Happy Birthday hanminsein
Orbs.7;59185 said:ကျွန်တော်အောက်မှာပြထားတဲ့ software များရဲ့ serial key,creak,full version လေးလိုအပ်နေပါတယ် ရှိတဲ့သူများကူညီပေးကြပါဦး :77:
-Advanced Vista Optimizer 2009
ဒီမှာနော် Systweak Advanced Vista Optimizer 2009 Patch -ICWT.exe (188.8 Kb)…
in ကျွန်တော်လိုချင်သောkey လေးများ
လိုချင်တာကို ဒီကနေရှာကြည့် တွေ့ရင် အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ အကောင့်ကနေဒေါင်းပေါ့ :D
ခေါင်းမပါတဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေရပါပြီ ကိုနာနိုရေ ... ဟင့် :(
in LetitBit.net Premium Account
မေမြတ်နိုး;59086 said:မြတ်နိုးက java ကိုလေ ့လာနေတာ...ခုမှစတယ်ဆိုပါတော့.. အဲဒါ java နဲ ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာလေးရှိလို့ဖိုရမ်က အစ်ကိုတွေ အမတွေ မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေ သိရင်ကူညီကြပါဦးနော်..
java ရဲ့feature,history,advantages,disadvantages.အဲဒါလေးတွေသိ…
in java နဲ ့ပတ်သက်လို ့
မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတစ်ခုအတွက် လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.....